MDC-T, Mavambo neZanu Ndonga Dzobatana Musarudzo
Chikunguru 08, 2013
HARARE — MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai, yabatana nemapato e Mavambo Kusile Dawn, MKD pamwe neZanu Ndonga pamberi pesarudzo dzemusi wa 31Chikunguru.
Vachitaura nevatori muHarare, mutungamiri weMKD, VaSimba Makoni, avo vanga vakatsigirwa naVaTsvangirai naVa Reketai Semwayo vanga vakamirira Zanu Ndonga, vati mubatanidzwa wavawirirana uyu uchange uchitsigira kuti VaTsvangirai vave mutungamiri wenyika.
VaSemwayo vatiwo vawona zvakakodzera kuti vabatane naVa Tsvangirai kuitira kuti mavhoti asapatsanurwe pakati pemapato anopikisana ne Zanu PF.
VaTsvangirai vatiwo vane chivimbo chekuti vanokunda musarudzo idzi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachishanda nesangano re Sapes Trust, VaIbbo Mandaza, vanoti muntungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vanogona kukundwa naVa Tsvangirai musarudzo dzemusi 31 Chikunguru zvichitevera danho ratorwa namapato matatu aya.
Zvichakadai, VaMakoni vakurudzira mutungamiri weMDC diki, Va Welshman Ncube, pamwe nemutungamiri we Zapu, VaDumiso Babengwa, avo vakaumba mubatananidzwa wesarudzo vari vaviri svondo rapera uchange uchitsgira VaNcube pasarudzo dzemutungamiri wenyika, kuti vauye vashande pamwe nevamwe pamberi pesarudzo idzi.
VaMakoni vanoti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi panyaya iyi.
Vaenderera mberi vachiti mapato abvumirana neMuvhuro kuumba mubatanidzwa wesarudzo havasi kuzokwikwidzana musarudzo dzekutsvaga nhengo dzeparamende.
Asi VaNcube vanyora pandemutande pa Facebook vachiti hapana nhaurirano dziripo nezvenyaya iyi.
VaNcube, avo vaiva munyori mukuru weMDC isati yapatsanuka muna Gumiguru 2005, ndivo vakatungamira chikwata chavo mukutsvaga munhu wekutungamira chikwata ichi, uyo akazova Va Arthur Mutambara, avo vakazobviswa pachigaro ichi naVa Ncube pakongiresi yebato iri muna Ndira 2011.
Zvichitevera kongiresi iyi, pakabva paita zvikwata zviviri, chimwe chichitungamirwa naVaNcube, chimwe chichitungamirwa naVa Mutambara, avo vanova mutuvedzeri wemutungamiri wehurumende.